हराएको या मेटिएको डाटा रिकभर एउटा SSD देखि | Data Recovery for SSD
कसरी एउटा SSD देखि हराएको अथवा मेटिएको डाटा पुन: प्राप्त गर्न
Home → कसरी एउटा SSD देखि हराएको अथवा मेटिएको डाटा पुन: प्राप्त गर्न
एक SSD देखि हराएको वा मेटिएको डाटा पुन: प्राप्त (ठोस राज्य ड्राइभ) जटिल हुन छैन.
निश्चित हुन, SSD लागि RescuePRO® डिलक्स संग, रिकभरी प्रक्रिया रूपमा सरल तीन रूपमा चरणमा छ.
*कृपया ध्यान दिनुहोस्, SSD लागि RescuePRO® डिलक्स डेटा पुन लागि डिजाइन गरिएको छ बाह्य SSD ड्राइव, यो सिस्टम ड्राइव देखि ठीक डिजाइन छैन.
SSD लागि RescuePRO® डिलक्स दुवै एक मा उपलब्ध छ Windows® र एक म्याक संस्करण.
विंडोज संस्करण यहाँ प्राप्त……
मैक संस्करण यहाँ प्राप्त….
कसरी आफ्नो SSD मेटिएको फाइल पुन: प्राप्त गर्न?
तपाईंको बाह्य SSD ड्राइभ आफ्नो कम्प्युटरमा जडान भएको छ भन्ने बीमा.
1. सुरु RescuePRO® र तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ रिकभरी विधि को प्रकार चयन – फाइल सामग्री द्वारा रिकभर (प्रकार) वा अवयवहराइरहेकोछ द्वारा रिकभर (undelete).
फाइल सामग्री द्वारा रिकभर यस फाइल प्रणाली हराइरहेको पनि आफ्नो सम्पूर्ण उपकरण स्क्यान र फाइल प्रकार सामग्री पहिचान गरेर डाटा ठीक हुनेछ.
अवयवहराइरहेकोछ द्वारा रिकभर एक undelete समारोह छ र एक वैध फाइल प्रणाली आवश्यक.
तपाईं आफ्नो रिकभरी लागि आवश्यक हुन सक्छ जो रिकभरी प्रकार निश्चित?
संकोच छैन निःशुल्क प्राविधिक सहयोग को लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
हाम्रो अनुकूल कर्मचारी आफ्नो स्थिति को लागि उचित रिकभरी चयन मार्फत हिंड्न सक्छौं.
तपाईं द्वारा ठीक चयन भने फाइल सामग्री, अर्को स्क्रिनमा तपाईं या त फोटो चयन गर्न अनुमति दिन्छ, अडियो / भिडियो, वा अन्य फाइलहरू.
2. Choose your removable media from the list (पूर्वनिर्धारित विकल्प पहिलो पटक RescuePRO चलाउन छ प्रयोग र कुनै ड्राइव पत्र तपाईँको मिडिया तोकिएको छ भने आफ्नो मिडिया वा शारीरिक मोडमा सीधा उपकरण प्रतिनिधित्व गर्ने ड्राइव पत्र प्रयोग).
चयन START को स्क्यान प्रक्रिया सुरु गर्न.
3. Once the scan completes you will receivealist of recovered files. फाइलहरू स्वचालित रूपमा हार्ड ड्राइभमा सुरक्षित छन्.
फाइलहरू हेर्न आउटपुट फोल्डर क्लिक:
कि यो छ! तपाईँको फाइलहरू अब उत्पादन फोल्डर देख्न मिल्ने हुनेछ.
नष्ट फाइलहरू साथ ड्राइभ सुरक्षित गर्न, सबै फाइलहरू पुन: प्राप्त अर्को भण्डारण यन्त्र वा प्रणाली अर्को ड्राइव पत्र सुरक्षित हुनुपर्छ. तपाईंले रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ कि ड्राइभमा सफ्टवेयर डाउनलोड नगर्नुहोस्.
कृपया सम्झना, तपाईं एक हार्ड ड्राइभमा फाइलहरू पुन: प्राप्त गर्न आवश्यक भएमा, हार्ड ड्राइभ रिकभरी लागि FILERECOVERY® प्रयोग कृपया.
तपाईं ठीक र परीक्षण संस्करण संग डेटा हेर्न असमर्थ थिए भने, त्यहाँ हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ अन्य परिस्थितिमा हुन सक्छ. हामी अनुभव टेक्नीसियन हाम्रो डाटा रिकभरी सेन्टर को एक एक शारीरिक रिकभरी प्रदर्शन गर्न सक्छन् जो छ. हाम्रो डाटा रिकभरी सेन्टर सम्पर्क गर्न, बस यहाँ क्लिक >>> डाटा रिकभरी केन्द्र<<<< हाम्रो रिकभरी उत्पादनहरु संग, हामी असीमित निःशुल्क प्राविधिक सहयोग प्रदान. तपाईं फरक संस्करण कुनै पनि प्राविधिक प्रश्न उपलब्ध छ वा जो संस्करण तपाईं लागि सबै भन्दा राम्रो छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्